News receving in last hours ...
Irrawaddy Mizzima LwinPyin RFA Duwun MyFoodMyanmar Coconuts Akhayar DVB InternetJournal Gandawin LadiesNews MCN TachileikNews Xinhua
News update every minute/hour!
358. ဥရောပနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ အလှဆုံး ရဲတိုကျမြား	-Irrawaddy
#Culture	(00h ago)
ဖွင့်ရန်။ Windsor ရဲတိုကျကတော့ အင်ျဂလိပျ လူ့အဖှဲ့အစညျး၊ ဗွိတိနျတျောဝငျ မိသားစုမြားနဲ့ ဗိသုကာလကျရာတှကွေောငျ့ ကြျောကွားပါတယျ။
357. ဈေးပိုသကျသာတဲ့ Cloud Storage အစီအစဉျသဈ “Google One” ကို မိတျဆကျ	-Irrawaddy
#IT	(00h ago)
ဖွင့်ရန်။ Google One အစီအစဉျအသဈမှာ အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့ တယောကျတညျး သုံးစရာမလိုတော့ဘဲ မိသားစုဝငျတှနေဲ့လညျး မြှသုံးလို့ရပွီဖွဈပါတယျ။
356. ဘားအံ၌ ဒုတိယအကြိမ် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီး လူ ၄၀၀၀ ခန့်ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရ	-Mizzima
#ပြည်တွင်း	(00h ago)
“ပထမရေတက်တုန်းက ဒုက္ခသည်တွေက ရေကျတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်သွားကြတယ်လေ။ အိမ်ပြန် ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ၂ ရက်လောက်နေတော့ ရေက ပြန်တက်လာရော။ အဲ့တော့ နေစရာမှ မရှိဘဲကိုး ပြန်လာကြတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် အရေအတွက်အားဖြင့် ပထမအကြိမ်ကလောက် မများပါဘူး”
355. ကိုယ်ဝန် ရှိ/မရှိ ဆီးစစ်ခြင်း နဲ့ သွေးစစ်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ	-LwinPyin
#ကျန်းမာရေး	(00h ago)
ကိုယ်ဝန် ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးဖို့ရာ ဆီးစစ်ခြင်းနဲ့ သွေးစစ်ခြင်း ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ စစ်ဆေးမှု နှစ်မျိုးစလုံးက human chorionic gonadotropin (hCG) လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတည်ရှိမှုကို ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုပါပဲ။
354. စားသောက်ဆိုင် မှာ မွေးခဲ့လို့ ဆိုင်က စားစရာတွေကို တစ်သက်တာ အခမဲ့စားသုံးခွင့်ရသွားတဲ့ ကလေးငယ်	-LwinPyin
#နိုင်ငံတကာ	(00h ago)
353. ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါကြောင့် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ ၁၂ နှစ်သား ကလေး လိုဖြစ်နေသူ	-LwinPyin
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ရှားပါးရောဂါတစ်မျိုး ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ရှိနေပေမယ့် ၁၂ နှစ်သား တစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်မျိုးပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ”ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လူကြီးတစ်ယောက် ပိတ်မိနေတဲ့ အခြေအနေ”လို့ တင်စားကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
352. ကလေးစစ်သားဟောင်းကို ဝန်းရံခဲ့တဲ့ ဒေါ်လေးလေးနဲ့ ကိုနောင်နောင်တို့ကို စွဲချက်တင်	-RFA
#lay lay	(00h ago)
ဖွင့်ရန်။ ကလေးစစ်သားဟောင်း ကိုအောင်ကိုထွေးကို ဝန်းရံထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဒေါ်စန်းစန်းဦး (ခေါ်) ဒေါ်လေးလေးနဲ့ ကိုနောင်နောင် တို့ကို ဆူပူအောင်ဖန်တီးစေမှု ပုဒ်မ ၁၅၃ ၊ နိုင်ငံတော် အကြည်အညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)တို့နဲ့ စွဲချက်တင်သင့်ကြောင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးက ဒီကနေ့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
351. Cele YatKwat: မြေးယောက်ျားလေး ရလို့ ပျော်နေတဲ့ လွင်မိုး	-Duwun
#entertainment/cele yatkwat	(00h ago)
ဖွင့်ရန်။ မြေးလေးက လွင်မိုးနဲ့တူတာတဲ့။
350. Cele YatKwat: နောက်ထပ်ပေါက်ကရတွေ လုပ်ဦးမယ့် ထူးအောင်	-Duwun
ဖွင့်ရန်။ M ဆိုင်းလုနဲ့ မေဂရေစ့်တို့ကို မပြီး ထိုင်ထလုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
349. US အခြေစိုက် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးသည့် marketplace by City Mart ၏ US Fair 2018	-MyFoodMyanmar
#နိုင်ငံတကာ အစားစာများ - International Food	(00h ago)
marketplace by City Mart မှ “The American Food Experience”အမည်ဖြင့် US အခြေစိုက် ကုန်ပစ္စည်းများ မိတ်ဆက်သည့် ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ marketplace by City Mart Golden Valley ဆိုင်ခွဲ၌ ညနေ ၄ နာရီ မှ ၆နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ “ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ marketplace by City Mart ရဲ့ ဈေးဝယ်သူများအတွက် ရွေးချယ်စရာများပြားပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော US မှတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း တစ်ရာကျော်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရုံသာမက အကောင်းဆုံးသော အစားအသောက်များကို ပြုလုပ်စားသောက်နိုင်စေရန် အစားအစား ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပါ မျှဝေပေးလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု marketplace […]
348. Myanmar president’s office asks people to stop throwing ‘letters and things’ at state leaders	-Coconuts
#Yangon, Weird, Politics, News	(00h ago)
Myanmar’s Office of the President issuedanotice today asking the public to stop throwing complaint letters at state leaders, which presumably refers to President Win Myint and State Counsellor Aung San Suu Kyi. The notice starts off withadescription of the office’s Complaint Department, to which members of the public can report grievances ...
The post Myanmar president’s office asks people to stop throwing ‘letters and things’ at state leaders appeared first on Coconuts.
347. ကဝမြို့နယ်မှာ ကမ်းပါးပြိုလို့ နေအိမ်တွေ ရွှေ့ပြောင်းရ	-RFA
#kawa	(00h ago)
ဖွင့်ရန်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝမြို့နယ်မှာ စစ်တောင်းမြစ်ကနေ ဒီရေတက်လာတာကြောင့် ကျေးရွာ ၅ခုမှာ ကမ်းပါးပြိုနေပြီး မြစ်ကမ်းတဲ့ဝေးတဲ့ နေရာတွေမှာ နေအိမ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတာတွေ ရှိပါတယ်။